Ithegi: iContact | Martech Zone
ULuhlu lweedilesi ze-imeyile eziBanzi zoQinisekiso, uQinisekiso, kunye nokuCoca
NgoLwesihlanu, Matshi 5, 2021 NgoMvulo, Meyi 16, 2022 Douglas Karr
Ngenxa yokulawulwa yiWordPress njengenkqubo yolawulo lomxholo, kuyamangalisa ukuba ingqwalaselo encinci ihlawulwa njani kwiqonga eliphambili kuguquko lokwenyani. Phantse lonke ushicilelo-nokuba lishishini okanye ibhlog yakho-lujonga ukuguqula iindwendwe zibe ngababhalisi okanye amathemba. Nangona kunjalo, akukho zinto ziphakathi kweqonga eliphambili ukulungiselela lo msebenzi. Guqula i-Pro iplagi ebanzi yeWordPress ebonelela ngokutsala kunye nokwehla komhleli, ukuphendula okwiphathwayo
NgoLwesine, Aprili 25, 2013 NgoLwesibini, Januwari 12, 2021 Douglas Karr
Abafowni bam abaSelfowni banikezela ngeeapps ezifikelelekayo kunye neewebhusayithi eziphathwayo ezizimeleyo, ezingenzi nzuzo kunye nezamashishini amancinci ngecandelo labo elikhokelayo lokwakha i-Do-It-Yourself (DIY). Ngaphezulu kweempawu ezingama-40 ezityebileyo zokusebenzisa iselfowuni, indawo kunye nemithombo yeendaba zentlalo, inokuba yeyona ndawo ifikelelekayo kwaye yomeleleyo yokwakha usetyenziso lweefowuni kwintengiso. Isicelo silula, ukubonelela ngokwenyathelo ngenyathelo ngenyathelo lokukutsala ngokuseta usetyenziso lwakho lweselfowuni. Inyathelo 1: Khetha ifayile yakho
Chitha i-299 yeedola kwaye uthumele indawo yakho kwi-Yahoo?
NgoLwesithathu, Juni 10, 2009 NgoLwesithathu, Juni 10, 2009 Douglas Karr
Unokufuna ukuqhubeka ngononophelo xa usebenzisa ezinye zezixhobo ezikumgangatho we-SEO ezikwi-Intanethi kwaye ufunda ezinye zeeforamu zendlela yokunyusa umgangatho wenqanaba lesiza sakho, igunya kunye ne-backlinks… olunye olu lwazi luphelelwe lixesha. Kwimeko enqaku, ndifunde kwiindawo ezininzi zokungenisa indawo yakho kulawulo lukaYahoo! Yayingumbono olungileyo. I $ 299, indawo yakho iya kufumana isalathiso ngaphakathi kwe-Yahoo! Imikhombandlela yeshishini, inyuselwa kwiYahoo's